Taarikada birta daloolsan waxay farsamayn kartaa wax soo saarka noocyada kala duwan iyo isticmaalka, sida tuubooyinka daloolsan birta, filtarrada tuubooyinka daloolsan ee birta, iwm, ee loo isticmaalo dhismaha, kiimikooyinka, macdanta, sifaynta saliidda iyo warshadaha kale, isticmaalka aan dhammaadka lahayn.
Qaababka baaska ee la heli karo ee birta daloolsan waxaa ka mid ah wareegsan, labajibbaaran, laba geesood, elliptical iyo meelo gaar ah.
Tuubooyinka daloola ee inta badan la isticmaalo waxaa ka mid ah 304, 304L, 316, 316L. Birta kaarboon sidoo kale waa la isticmaali karaa.
Tuubbada birta aan daloolin ee daloolku waxay ka samaysan tahay saxan bir ah oo T304 ah ama saxan bir ah oo t316 ah. Taarikada tuubooyinkani waxay leeyihiin godad taxane ah, kuwaas oo adiga laguu qaabayn karo. Qaababku way kala duwanaan karaan iyadoo ku xidhan cabbirka godadka, masaafada u dhaxaysa godadka, iyo dhumucda alaabta.
Si ka duwan sida birta kaarboonka, birta aan lahayni waxay leedahay iska caabin daxalka. Waxay ka kooban tahay chromium, kaas oo sameeya filim ilaalin ah oo aan muuqan marka ay la kulmaan ogsijiinta. Marka loo eego awoodda adag ee birta aan la taaban karin, waxaa loo qaybin karaa saddex qaybood. Biraha birta ah ee Austenitic ee lagu adkeyn karo shaqada qabow waxay la kulmaan heerar kala duwan oo naqshadeyn ah. Asal ahaan waa birlab la'aan, in kasta oo laga yaabo inay xoogaa birlab ah noqdaan shaqada qabow awgeed.
Tuubooyinka daloolin ee birta ah waa nooca chromium toosan waxaana lagu adkeyn karaa daawaynta kulaylka.
Mid ka mid ah birta guud ee sida aadka ah loo isticmaalo. Waxay leedahay xoog aad u fiican, iska caabin daxalka iyo habka wax soo saarka. Si loo yareeyo roobabka carbides inta lagu jiro alxanka, 304L ayaa la isticmaalaa marka kaarboonku yar yahay.
Marka la barbar dhigo 300 oo taxanayaal ah oo taxane ah, waxay leedahay iska caabin daxaleed aad u fiican marka lagu isticmaalo bay'ada daxalka adag (sida biyaha badda, kiimikooyinka, iwm.). Si loo yareeyo roobabka carbides inta lagu jiro alxanka, 316L waxaa loo isticmaalaa sida kaarboonka hoose.
1.) jawaab degdeg ah:
Had iyo jeer waa qaali mustaqbalka. Waxtarka isgaarsiinta sare, hel jawaabtayada ugu dhaqsiyaha badan. Weydiintaada waxaa lagaga jawaabi doonaa 8 saacadood gudahood;
2.) Kooxdayada farsamada ayaa kaa caawin kara inaad u turjunto fikradahaaga qaab muuqaal ah, waana bilaash; Naqshadaynta CDA bilaashka ah;
3.) muunad: bixi tiro badan oo muunado ah xaqiijintaada ka hor wax soo saarka guud;
4.) kormeerka: xakamaynta tayada adag waxay hubisaa in alaabta lagu qanci karo laguu soo diri karo;
Habaynta gaadiidka: iibsada alaabo kala duwan? Isku soo wada dir si aan u bad baadino.
Hore: Jidka dhexe ee go'doominta ee dawladda hoose
Xiga: Xirmada shaandhada shaandhada lakabka badan ee birta ka shaqaynaysa